कसरी भिडियो लोगो सिर्जना र सम्पादन गर्ने - तपाइँले जान्नु पर्ने सबै - Print Peppermint
जुलाई 6, 2021 | डिजाइन सफ्टवेयर, लोगो डिजाइन, भिडियो
के तपाईंलाई त्यो अनुसार थाहा छ? अनुसन्धान, Of२% व्यवसाय भन्छन कि भिडियो सामग्रीले उनीहरूको रूपान्तरण दर नाटकीय रूपमा बढाएको छ? भिडियो नयाँ खरीददारहरूलाई आकर्षित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, र त्यसैले तपाईंको साइटमा भिडियो सामग्रीहरू नहुनु ठूलो गल्ती हुन सक्छ। तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई तपाइँको ब्यापार को सुविधाहरु र लाभहरु को व्याख्या गर्न सक्षम हुनु हुँदैन। यसलाई ठीक गर्ने उत्तम तरिका भनेको भिडियो लोगो सिर्जना गर्नु हो।
एक भिडियो लोगो के हो, र तपाईंलाई किन एक आवश्यक छ?
भिडियो लोगो तपाईंको लोगोको छोटो भिडियो हो। एनिमेटेड ट्रान्जिसन र लुभावनी दृश्यहरु संग, आश्चर्यजनक अभ्यस्त, तपाईंको लोगो जीवनमा आउँदछ! एक भिडियो लोगो प्रतिस्पर्धा र आफ्नो उत्पाद को ध्यान आकर्षित गर्न को लागी तपाइँको ब्रान्ड फरक छुट्टि तरीका हो। त्यहाँ नि: शुल्क कार्यक्रम को एक प्रकार छ Clipchamp, Animoto or भिडियोसोडदेव, जहाँ तपाईं एक भाग्य खर्च र उन्नत भिडियो सम्पादन कौशल बिना एक भिडियो लोगो सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
यस प्रकारको भिडियो सिर्जना गर्नु पहिलो नजरमा धेरै सजिलो लाग्न सक्छ, तर यो धेरै नै जटिल छ। यो सम्झन को लागी एक महान लोगो बनाउन को लागी धेरै मेहनत लिन्छ। यस प्रक्रियामा बजार अनुसन्धान, तपाईंको ग्राहकलाई बुझ्ने र विस्तृत समावेश छ लोगो डिजाइन। डिजाइनरहरू प्राय: एकल लोगोको दर्जनौं पुनरावृत्तिहरू सिर्जना गर्छन् यसलाई पूर्णतामा ल्याउनका लागि।
यदि तपाईं आफ्नो भिडियो लोगो डिजाइन गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ तर कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन भने, हाम्रो लेख तपाईको लागि उपयोगी हुनेछ। हामीले तपाईंलाई एक उत्तम भिडियो लोगो सिर्जना गर्न मद्दतको लागि केहि चरणहरू कभर गरेका छौं जुन केवल तपाईंको लागि मात्र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि अपील गर्दछ।
बाट लिइएको: https://www.virtualstacks.com
भिडियो लोगो सिर्जना गर्नका लागि मार्गदर्शन
ईतिहासको साथ सुरू गर्नुहोस्
कुनै पनि कम्पनीको मुख्य कार्य भनेको नाफा कमाउनु र पैसा कमाउनु हो, तर तपाईंले यो लोगोलाई यो लोगोमा राख्नु हुँदैन। कसैले पनि तपाईंले आफू र तपाईंको उत्पादन राम्रोसँग बेच्नु पर्ने तथ्यलाई इन्कार गर्दछ। तर बजारहरू सोच्न चाहन्छन् कि किनमेल गर्नेहरू तपाईंको उत्पादनको बारेमा तथ्य भन्दा कथाहरूमा बढी आकर्षित हुन्छन्। यसको मतलब यो छ कि कुनै प्रकारको कथा लोगोमा इम्बेड गर्नुपर्नेछ।
तपाईंले आफ्नो भिडियो लोगो डिजाइनको बारेमा सोच्न अघि, तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्छ - तपाईंको कम्पनीको ईतिहास के हो? तपाइँको कम्पनीले के गर्छ भन्ने भन्दा बाहिर जानु पर्छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प तपाईले किन यस्तो गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ। ठ्याक्कै "किन" तपाईको कथाको आधार हो, र त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर हो कि तपाईले आफ्नो लोगोमा र size्ग, आकार र आकारको सहायताले मूर्त मूर्त बनाउनु पर्छ। जब हामी कोका कोला लोगोमा हेर्छौं, हामी खैरो तरलको एक बोतल देख्दैनौं; हामी ध्रुवीय भालु र ठूलो अक्षरहरूमा ध्यान दिन्छौं।
बाट लिइएको: https://www.amazon.com
तपाईंको ब्रान्ड वर्णन गर्न शब्दहरूको साथ आउँनुहोस्
एक पटक तपाईं आफ्नो ब्रान्डको लागि कहानी लिएर आउनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो लोगो सिर्जना गर्न अघि बढ्नु पर्छ। पहिले, तपाइँ एक शब्द को लागी आउनु पर्छ; यो राम्रो हुनेछ तपाईंको कम्पनीको वर्णन गर्न। केहि शब्दहरू फेला पार्ने प्रयास गर्नुहोस् जसले वर्णन गर्दछ तपाईं मात्र के गर्नुहुन्छ तर किन तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ भनेर पनि वर्णन गर्दछ। हामीले अघिल्लो अनुच्छेदमा यसको बारेमा कुरा गर्‍यौं। प्रत्येक शब्दले तपाइँको पज्जललाई पूरक गर्न सक्छ र तपाइँलाई एक सुसंगत चित्र निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाइँको ब्रान्ड अवधारणाको सही वर्णन गर्दछ।
धेरै वेबसाइटहरूले यसमा तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछन्। तिनीहरूको मद्दतको साथ, शब्दमा लेखेर, तपाईं धेरै समानार्थी शब्दहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं कति जानकारीमूलक हुन सक्नुहुनेछ भनेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। तपाईं अगाडि जान सक्नुहुन्छ र एक समानार्थीमा केहि अधिक मेलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई अधिक शब्दहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ जुन तपाइँको ब्रान्डको उत्तम वर्णन गर्दछ।
बाट लिइएको: https://www.thesaurus.com
दिमागमा आउने विचारहरू स्केच गर्नुहोस्
"किन" प्रश्नको उत्तर दिए पछि र तपाईंको ब्रान्ड वर्णन गर्न केहि शब्दहरू लिएर आएर, बसेर केहि विचारहरू लेख्नुहोस्। तपाईंले कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा सोच्दा तपाईको दिमागमा आएको प्रत्येक विचारलाई लेख्नु पर्छ। यदि तपाईंको पहिलो विचारहरू असफल भएमा तपाईं हतोत्साहित हुनु हुँदैन। तपाईंको स्केचहरू परिष्कृत गर्न जारी राख्नुहोस्, र तपाईं एक उत्तम उत्पाद सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई तपाईको ब्रान्ड वा एक वा अन्यको फारम वा नाममा ध्यान केन्द्रित गर्न सल्लाह दिन्छौं। ध्यान दिएर लायक केही विवरणहरू छन्:
तपाईंको लोगोको आकार धेरै सरल हुनुपर्दछ। तपाईंले बिभिन्न लोकप्रिय छविहरू र आकारहरू प्रयोग गर्नुपर्दैन किनकि यस तरीकाले तपाईंको भिडियो लोगो अद्वितीय हुनेछैन। तपाईं यस चरणमा जति रचनात्मक हुनुहुन्छ, तपाईंको अन्तिम लोगो राम्रो हुनेछ।
तपाइँको रंग छनौट संग धेरै सावधान रहनुहोस्। तपाईंले आफ्नो लोगोमा बहु रंगहरू समावेश गर्नुपर्दछ। ध्यान दिनुहोस् लोगो डिजाइन प्रवृत्ति र कुन रंगहरू सामान्यतया बजारमा प्रयोग गरिन्छ। नियमको रूपमा, तपाईं तीन भन्दा बढी र use प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
तपाइँको सर्वश्रेष्ठ स्केचहरू परिक्षण गर्नुहोस्
तपाईंले कम्तिमा एक दर्जन स्केचहरू सिर्जना गरेपछि, ती मध्ये तीन चयन गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई लाग्छ तपाईलाई सब भन्दा राम्रो वा धेरै आकर्षक लाग्छ। तपाईंले यी स्केचहरू तपाईंको साथीहरू, सहकर्मीहरू, आफन्तहरू, वा अन्य व्यक्तिहरूलाई पठाउनु पर्छ जुन राम्रोसँग तपाईंको सम्भावनाको विवरणको लागि उपयुक्त छ। यसले तपाइँलाई धेरै उद्देश्यपूर्ण आकलन र तपाइँको स्केचमा बाहिरी परिप्रेक्ष्य प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ। यसले ग्राहकहरूलाई तपाईंको ब्रान्ड कसरी देख्ने भनेर पनि देखाउँदछ।
तपाईं नकारात्मक समीक्षाको लागि तयार हुनुपर्छ। याद गर्नुहोस् कि यस प्रकारको आलोचनाले तपाईंको भिडियो लोगो सुधार गर्न मद्दत गर्दछ र विकासको लागि अन्तिम अवधारणा छनौट गर्दछ।
चयनित स्केचलाई अन्तिम रूप दिनुहोस्
तपाईं लगभग एक उत्तम लोगो सिर्जना गर्न आधा बाटोमा हुनुहुन्छ। एकल स्केच छनौट गर्नुभयो जुन तपाईंलाई लाग्छ कि सबै भन्दा राम्रो हो, तपाईंले यसलाई अंतिम रूप दिनु आवश्यक छ, साथै कहानी सुरु गर्नुहोस् जुन यो सबै सुरु भयो।
सबै चीजको पूर्ण रूपले अन्तिम रूप दिन, फेरि शब्दमा हेर्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्ड वर्णन गर्दछ, त्यसपछि स्केचमा र आफैलाई सोध्नुहोस् - कुन स्केचले अझै कभर गर्दैन? तपाईंको भिडियो लोगो थप डिजाइन गर्न यी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले अस्वीकृत स्केचहरू र तपाईंको मुख्य लेआउट परिष्कृत गर्न उनीहरूको उत्तम गुणहरू प्रयोग गर्दा यो पनि हेर्नुहोस्।
कहाँ छ मेरो भिडियो पोस्ट गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ?
तपाईंको लोगोको लागि एक प्रोटोटाइप डिजाइन गर्नुहोस्
सैद्धान्तिक भाग पहिले नै पूरा भइसकेको छ। अब समय आयो कि प्राविधिक मुद्दाहरूमा जान र तपाईंको चित्रलाई कागजको टुक्रामा डिजिटल मोडेलमा अनुवाद गर्ने। वास्तविकतामा यसलाई अनुवाद गर्न तपाईले डिजाइनरहरूलाई ठूलो रकम तिर्नु पर्दैन। त्यहाँ धेरै नि: शुल्क प्रोग्रामहरू र प्लेटफर्महरू आज उपलब्ध छन् तपाईंको लोगो सम्पादन गर्न। सबैभन्दा प्रसिद्ध भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर मध्ये एक हो मोभावी। यसमा सबै सुविधाहरू र उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई एक महान भिडियो लोगो सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ। सिर्जना गर्दा, तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि सबै पाठ र आकारहरू पूर्ण रूपमा राखिएको छ र लोगो आफैमा सही पigned्क्तिबद्ध गरिएको छ।
बाट लिइएको: https://www.movavi.com
बहुमुखी रंग छनौट गर्नुहोस्
तपाइँको लोगो सिर्जना गर्दा, तपाइँ यसको रंग योजना को प्लेटफर्म को पृष्ठभूमि संग जोड्नुहोस् जसमा तपाइँले यसलाई सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईंले सम्झनु पर्छ कि तपाईंको भिडियो लोगो बिभिन्न पृष्ठभूमिमा हुनेछ, र त्यसैले तपाईंले बहुमुखी रंगहरू छान्नु आवश्यक छ।
मा विशेषज्ञहरु Magisto, एक भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर, सिफारिश गर्दछ कि तपाईं यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लोगोमा कालो विकल्पहरू दुबै कालो र हल्का पृष्ठभूमिहरूको लागि छन्। यदि तपाईंले यो विकल्प उपलब्ध गराउनु भएको छ भने तपाईंले आफ्नो फन्टको रंग मात्र परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। तपाईं समान लोगोका धेरै भिन्नताहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, केवल विभिन्न र colors्गका साथ, विभिन्न प्रचार उत्पादनहरूको अर्डर गर्न तयार हुन जसमा तपाईंको लोगो प्रदर्शित हुनेछ।
कोका कोला उदाहरणमा फर्कदै, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि लोगो अवस्थित फरक रंगका बोतलहरूमा प्रदर्शन हुन्छ जुन त्यसमा अवस्थित छ। यसको मतलव कम्पनीले बहुमुखी लोगो सिर्जना गर्न सक्षम भयो जुन विभिन्न र colorsहरू सूट गर्दछ।
बाट लिइएको: https://us.coca-cola.com
एक फन्ट छनौट गर्नुहोस्
अब तपाइँ तपाइँको लोगो छवि मा पाठ जडान गर्न आवश्यक छ। तपाईको कम्पनीको नाम के प्रकारको फन्टमा लेख्ने भनेर तपाईले सोच्नु पर्छ। यो अनौंठो लाग्न सक्छ, तर नामको लागि प्रयोग गरिएको फन्टले तपाईको कम्पनीको बारेमा धेरै कुरा भन्न सक्दछ। त्यहाँ धेरै प्रकारका फन्टहरू छन्। तपाईं दुबै आधुनिक र क्लासिकबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
फन्टहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छैन जुन प्रत्येक शब्द प्रोसेसरको मानक संरचनाको सूचिसँग सम्बन्धित छ। टाइम्स न्यू रोमन, लसिडा हस्तलेखन, हास्य सान्स, र अन्य मानक फन्टहरूका उदाहरणहरू। यस्तै फन्टहरूले तपाइँको लोगोलाई मद्दत गर्दछ तर मात्र यसलाई कम अद्वितीय बनाउँदछ।
बाट लिइएको: https://www.maconprinting.com
अन्तमा, म भन्न चाहन्छु कि एक भिडियो लोगो सिर्जना गर्नाले तपाईको पहुँच धेरै पटक बढाउन मद्दत गर्दछ, साथै हजारौं नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यो जोड्नु पर्छ कि लोगो सिर्जना गर्नुको सट्टामा यो जटिल र लामो प्रक्रिया हो, त्यसैले तपाईं यसलाई सिर्जना गर्न हतार गर्नुहुन्न। खराब भिडियो नराख्नु भन्दा पनि पूर्णतामा तपाईंको भिडियो लोगो प्राप्त गर्न केहि बढी समय खर्च गर्नु राम्रो हो। यसले तपाइँको धेरै समय र प्रयास बचाउन सक्छ किनभने त्यसोभए तपाइँले फेरि भिडियो लोगो फेरि गर्नुपर्दैन।
6 Every कुराहरु प्रत्येक डिजाईन विद्यार्थीले २०२१ मा थाहा पाउनुपर्दछ
कसरी किताब पढ्ने मार्फत लेखन कौशल सुधार गर्ने →